Sidee buu Faransiiska uga taqalasi doonaa kooxda Magafe ee dalka Liibiya? | Somaliska
Sidee buu Faransiiska uga taqalasi doonaa kooxda Magafe ee dalka Liibiya?
Shirkii saddex cisho ka hor dalka uga soo af jarmay madaxda qaaradda Afrika,Yurub iyo Qarammadda dalka Ayfari Kost ugu soo af jarmay ayaa mdaxdii kulankaasi ka qeyb gashay isku af gartay in talaabo laga qaado kooxda Magafe ee suuqa adoonsiga ah ka sameeystay meelo ka mid ah dalkaasi Liibiya.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo isaga hogaaminayey shirkan ayaa balan qaaday in dowladiisa ay gacan ka geeysan doonto siddii talaabooyin ay ka mid yihiin meleteri iyo mid ciidan kaleba. Wareysi uu siiyey taleefeyshinka France 24 ayuu carabka ku adkeeyey in haatan dal isagaba la il daran siyaasad qalifsan iyo kooxo iska soo horjeedo uusan dagaal toos ah ku qaadeeyn balse uu la imanayo talaabo meleteri kale oo wax looga qabanayo muhaajirinta Afrikaanta ah ee sida adoonsiga ah loogu kala iibsanayo suuqdayada dalkaasi.
Maalmaha soo socda ayaa wararku sheegayaan in la qaadayo talaabada lugu go’doominayo xeryaha lugu hayo muhaajiriinta, lana weerari doonta kooxda Magafe. Muhaajirintan ayaa markaas ka dib la qorsheynayaa in dalalkoodi dib loogu celin doono kolka laga soo furto kooxdaasi.
Sagaal wadan oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Jaad iyo Neeyjar ayaa go’aansaday in Faransiisku qaado talaabadda ka dhanka ah kooxaha dalka Liibiya ka furtay suuqa adoonsiga, sidaasi si la mid ah Qarammadda Midoobey, Afrika iyo Yurub ay qeyb ka yihiin. Howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah cuno qabateeyn lugu soo rogo shaqsiyaad la rusan yahay ineey qeyb ka yihiin suuqaasi ganacsiga adoonta. Waxaana la soo taagi doona maxkamadda caalamiga ah.
Ugu dambeyntiina tan iyo markii taleefeyshinka CNN-ta ee Mareykanka soo gudbiyey barnaamij looga hadlayo sida muhaajiriinta Afrikaanta ah qaab adoonsi ahaan loogu iibsado dalkaasi islamarkaasina dhibaato xoogan loo geeysto ayaa waxaa uu abuuray guux xoogan oo caalamka ah. Waxaana dalkaan Iswiidhan magalooyinkiisa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo falkan foosha xun ee lugula kacayo muhaajirinta Afrikaanta ah ee naftooda la soo baxsaday si ay u helaan nolol ka duwan midkii ay kaga yimaadeen dalalkoodii.